Nyochaa ngwanrọ, Ndụmọdụ, Nkọwa, na saịtị Nchọpụta (66 Resources) | Martech Zone
Ọtụtụ mmadụ ole na ole na-eche etu m ga - esi chọta ụdị ahịa na teknụzụ azụmaahịa na ngwa ọrụ dị ebe ahụ nke ha anụbeghị banyere ya, ma ọ bụ nke ahụ nwere ike ịbụ beta. Wezuga na nrịba ama nke m debere, enwere ụfọdụ akụ dị ukwuu ebe ịchọta ngwa ọrụ. Anọ m na nso nso a na-ekerịta ndepụta m na Matthew Gonzales ma ọ kesara ụfọdụ n'ime ọkacha mmasị ya ma ọ malitere m iwu ụlọ zuru ezu.
Site na nhọrọ dị ịtụnanya nke ngwaọrụ dị, ndị na-ere ahịa nwere uru dị iche iche iji chọta azịza ahaziri ahazi na ọnụ ala. Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ onye ọ bụla m na-arụ ọrụ enwewo ike ịkwalite ngwaahịa na ọrụ na-enyere ha aka ma na-ebelata mmefu kwa afọ. Na nke ahụ gụnyere ndị ahịa m nwere nke na-ewulite azịza omenala site na ịnweta API ọhaneze.
Akụkụ akụkụ na nke a, anaghị m ahụ saịtị ndị a dị ka onye na-asọmpi Martech Zone ma ọlị. Ebumnobi m na Martech Zone bụ mgbe ịme ka gị ngwá ọrụ, nye ụfọdụ isi differentiators, na mgbe ahụ ka ị ichoputa n'ihu na ma ọ bụ ihe kwesịrị ekwesị ngwọta.
Otu ihe mere na anaghị m egbu oge iji atụnyere nke ngwanrọ ngwanrọ bụ na ngwọta kacha mma dị nnọọ nkeonwe… usoro maka ụlọ achọrọ, nyocha, na na-ahọpụta software nwere ọtụtụ mgbanwe - ndị mmadụ, usoro, oge, mmefu ego, atụmatụ, njikọta, wdg. Ngwọta kachasị mma maka otu ụlọ ọrụ abụghị azịza kachasị mma maka onye ọzọ.
Ọ bụrụ na ị nwere mmasị, enyerela m ọtụtụ ụlọ ọrụ aka ịchekwa ọtụtụ nde dollar site na ime nyocha zuru ezu nke ngwugwu ha, na-achọpụta ohere iji jiri ha mee ihe n'ụzọ ka mma, na ịchọta ha ihe ngwọta kwesịrị ịkwaga na nke ahụ ga-enye nlọghachi dị mma na teknụzụ ha. .
Ọgụgụ ọgụgụ isi nke Martech
InetlọM - Ọ bụrụ n ’ị bụ onye ndụmọdụ ma ọ bụ ụlọ ọrụ na-azụ ahịa, ị ga-achọ inyocha CabinetM, ihe ngwọta iji dee akwụkwọ gị nchịkọta ahịa. Ọ bụghị naanị na ikpo okwu na-eme ka ụlọ ọrụ nwee ike nyochaa, ma jikwaa teknụzụ ha, ma chọpụta ngwaahịa iji jikọta, kwado ma ọ bụ dochie, mana ọ na-enyekwa nzaghachi nke ụdị teknụzụ ndị yiri nke ndị ụlọ ọrụ ndị ọzọ nakweere.
Saịtị Ndụmọdụ Software
Ndị a bụ ọrụ na saịtị m na-ele anya na ọ dị mma. Offọdụ n'ime ha bụ ngwaọrụ itinye ego, ụfọdụ saịtị nchọta ọhụụ, na ọtụtụ bụ saịtị ngwanrọ.
Akụkụ akụkụ… ma ọ bụrụ na ị na-na na a ahịa ma ọ bụ ahịa technology n'elu ikpo okwu, dị njikere na gị n'elu ikpo okwu a gụnyere na saịtị ndị a. Ọbụghị naanị na ọ nwere ike ibute ụzọ ruru eru nwere ebumnuche dị ukwuu ịzụta, ọ ga - enyere aka ịmara njirimara gị ma nye gị mkparịta ụka dị oke mkpa maka ogo ogo ọchụchọ gị.
ọzọ - Nye ihe ngwa ị chọrọ iji dochie na ha na-enye gị oké uzo ozo, dabere na onye ọrụ na-atụ aro.
Nyocha - Chọta ma tulee ngwaọrụ kachasị mma maka azụmaahịa gị
Ntinye - Njirimara web ọhụrụ, desktọọpụ, na ngwa ngwa ekwentị.
AppSumo - na-elekọta ngwaahịa ahụ. AppSumo ga-elekọta ahịa ahụ.
Uchechukwu - Na-egosipụta kacha mma na ngwa weebụ.
Astrogrowth - Ntuziaka sọftụwia na ntule iji chọpụta nyiwe maka ụdị nke ọ bụla.
Ndepụta Beta - Ndepụta Beta na-enye nkọwa banyere mmalite ịntanetị na-abịa. Chọpụta ma nweta oge ọdịnihu.
BetaPage - Chọgharịa, chọpụta, ịchụ nta mmalite, na echiche ọhụrụ.
Kappa - na - enyere ndi ahia aka na ndi n’abughi oru aka ichota sọftụwia nke ga enyere ha aka imeziwanye, itolite, ma nwee ọganiihu.
Chief.io - na-enye ndị ọkachamara ha nwere ahụmịhe na nghọta ziri ezi site na ịbụ ezigbo ndị ọrụ ngwanrọ.
Crazy banyere Startups - Njirimara ọ bụla mmalite.
Crozdesk - Ihe nchọgharị weebụ.
Crunchbase - CrunchBase bụ nchekwa data doro anya nke usoro okike mmalite. Ihe ngosi azụmahịa na-ejikọ ụlọ ọrụ, ndị mmadụ, ngwaahịa na ihe omume iji nye data ịchọrọ. Idenye aha na n'elu ego email!
Discover igwe - Tụlee ngwa maka azụmahịa.
Nnụnnụ Erli - Ebee ka amuru ohuru ohuru.
FeedMyApp - nyochara ngwa ntanetị & ekwentị.
G2 Ìgwè mmadụ - Tulee sọftụwia azụmaahịa kachasị mma na ọrụ dabere na njirimara onye ọrụ yana data mmekọrịta. Nyocha maka CRM, ERP, CAD, PDM, HR, na ahịa sọftụwia.
GetApp - Nyochaa, tulee, ma tulee sọftụwia azụmaahịa pere mpe. GetApp nwere sọftụwia na-enye, SaaS na Cloud Apps, nnwale onwe ha, na nyocha.
Nweta Tech Press - Nweta 3000+ ndị nta akụkọ teknụzụ, Growth Hacks, Nyefee saịtị, ndị otu Facebook, na ndị ọzọ.
Peeji Na-eto Eto - Na-akwado ma na-atụle ngwa weebụ ọhụrụ maka n'efu.
Hacker News - a na ebe nrụọrụ weebụ na-elekọta mmadụ na-elekwasị anya na sayensị kọmputa na ịzụ ahịa.
EchicheSquares - oghere dị n'ịntanetị iji nye ndị mmadụ nkwado na nzaghachi maka echiche azụmaahịa.
Kickoff agbam ume - Tọpụtara ngwaahịa ma ọ bụ ngwa? Nyefee ya ma nweta mmụba ozugbo na okporo ụzọ.
Mmalite mbido - Mbido nyocha, mkpali, echiche, na akụkọ.
Ebuputere! - obodo ebe ndị mere ihe ngosi gosipụtara mmalite / ngwaahịa ha wee nweta nzaghachi site na ndị nnochi ụzọ.
Ẹkedori Lister - Bilie mmalite gị n'ihu ndị mbido na ndị isi ụlọ ọrụ.
Launch na-esote - Ndị kasị kwere nkwa na mmalite ụwa.
Ndepụta - Nchọpụta na ndepụta nwere ike ịmepụta ọtụtụ ndepụta yana nnukwu ngwaọrụ.
Ntughari - ebe ị ga-esi mụtakwuo banyere teknụzụ na ọtụtụ ụzọ ọ ga - esi mee ka ndụ gị ka mma.
Ahịa - Nnyocha, atụmanya, na soro ụlọ ọrụ ndị na-eto eto ọsọ ọsọ na-eme ọgụgụ isi
Net - ngwa kacha mma, ngwaahịa na ọrụ kacha mma.
OsoteBigWhat - Ndị mbido India, ndị guzobere ya, ndị ahịa CXOs na ndị ahịa ya.
Pịa igodo - Chọta ndị nta akụkọ ka ha dee maka mbido gị.
ProductHunt - ProductHunt bụ ọgwụgwọ nke ngwaahịa ọhụrụ kachasị mma, kwa ụbọchị. Chọpụta ngwa ekwentị ọhụụ, weebụsaịtị, na ngwaahịa teknụzụ nke onye ọ bụla na-ekwu maka ya.
Na-akwado - Ndepụta nke ebe kachasị mma iji nyefee mmalite gị
Na-akwalite oru ngo - Gosipụta ihe ndị i kere eke na ụwa.
Nye m mmalite - Nyefee mmalite gị ka egosipụtara gị.
Ntinye aka - Nyefee mmalite gị n'efu ma chere maka nzaghachi. Nweta profaịlụ onwe gị ma kesaa ọrụ gị.
Mbido Random - Maka arịrịọ ọ bụla na RandomStartup.org ga-akpọrọ gị na mmalite mmalite. Ume peeji ahụ ma ị ga-achọpụta mmalite ọzọ.
Reddit mmalite - otu nzukọ nke ndị ọchụnta ego na-arụ ọrụ maka enweghị nzaghachi na enweghị mmasị, ndụmọdụ, echiche, na mkparịta ụka.
SaaSHub - independentlọ ahịa ngwanrọ nọọrọ onwe ha.
Uwa - Chọpụta ngwaahịa ndị dị mma maka ụlọ ọrụ gị
Egwuregwu - SocialPiq bụ ọrụ iji chọta ezigbo usoro mgbasa ozi mmekọrịta maka mkpa gị. Enwere ọtụtụ ngwa ọrụ mgbasa ozi na-elekọta mmadụ ebe ahụ, na SocialPiq na-enyocha ihe ndị dị mkpa, na-etinye ụzọ dị mfe iji ghọta ihe ha na-eme.
Ndụmọdụ Sọftụwia - Nyocha software sitere na ndị ọkachamara na Business na Ndụmọdụ Sọftụwia.
N'oge opupu ihe ubi - Jikọọ na ụwa kasị ukwuu echiche spotter netwọk.
Stacklist - Ntuziaka a gwọrọ na nyocha nke ndị ntọala maka ngwa azụmaahịa iji bulie mmalite gị.
Nkwado - Chọpụta, kpaa, ma kesaa ngwa ọrụ na ọrụ kacha mma.
StartItUp - StartItUp bụ ndekọ mmalite ebe ị nwere ike ịnyefe mmalite gị kpamkpam n'efu.
Mbido - na-enyere aka ịmalite ndị ahịa, pịa, ego na ndị ndụmọdụ.
Mbido Beat - na-ewe ọhụụ ọhụrụ ma ka mma na mmalite si gburugburu ụwa.
Mbido Buffer - Anyị maara otu o siri sie ike ịkwalite mbido gị. Anyị nọ ebe a iji nyere aka!
Mbido Digger - Kacha ọhụrụ ngwaahịa na ndi oru itumgbere metụtara mkparịta ụka si gburugburu web.
INC mmalite - ebumnuche iji nyere aka na mbido na-aga nke ọma ma na-aga nke ọma n'ahịa asọmpi a.
Mbido Na-akpali - Nyefee ma kwalite mmalite gị
Mmalite Ọrụ - mkpuchi nke mmalite ọhụụ na-atọ ụtọ n'ịntanetị.
Mmalite ingnye ọkwa - ogo nke mbido dabere na mkpa mbido na mmekọrịta mmadụ na ibe ya.
MbidoLi.st - Chọta, soro, ma kwado mmalite.
StartUpLift - gosipụta mmalite gị ma nyere aka nara nghọta, nzaghachi ga-arụ ọrụ.
Mbido - Mee ka ebido mmalite gị na ntanetị, ebe nyocha, na blọọgụ ụlọ ọrụ iji nyere aka na mbido ahịa azụmaahịa naanị $ 50.
TechCrunch - TechCrunch bụ ụlọ ọrụ mgbasa ozi teknụzụ na-eduga, raara onwe ya nye maka ịmalite mmalite mmalite, nyochaa ngwaahịa productsntanetị ọhụrụ, na ịgbasa ozi teknụzụ.
Ngwaọrụ - Saịtị na-enyocha ngwa oru.
Trustpilot - nyocha ndị ahịa. Nweta ezigbo akụkọ sitere na ndị na-azụ ahịa dị ka gị. Gụọ, dee, ma kesaa nyocha.
Neti Neti - na-enye ọgụgụ isi zuru ezu banyere iji okwu, vetikal, na ụlọ ọrụ.
Ntụkwasị obi - bu ndi okacha-amara nke ndi oru akuko nyocha software, mkparita uka software, na omume kacha mma.
Are na-achọ mmalite mmalite nke Canada? Canada amalitela saịtị ha, Mmalite na Canada, ịchọta mmalite.
Enwere ngwaọrụ ndị ọzọ dị ebe ahụ, mana achọpụtara m na ọtụtụ n'ime ha na-akpaghị aka, ha aghọwo ụlọ ọrụ SPAM, ma ọ bụ na-ehichaghị ndị otu ahụ. Ngwaọrụ ndị a dị n'elu enyegoro anyị nnukwu ngwaọrụ.
Aha kwesịrị nsọpụrụ itinye ebe a bụ MyStartupTool, ndekọ nke ngwa ọrụ maka ịkwalite mmalite gị. Nakwa, dịka ndị na-akwado anyị na ndị ahịa anyị abawanyewo, ha abụrụla ihe ndu dị egwu. Ọ bụrụ na ị na-achọ iwu microsite iji dọta ndị ọrụ beta, gbaa mbọ hụ na ị ga-achọpụta Akwụkwọ.
Ngosipụta: Ana m eji njikọ njikọta na post a.
Tags: ngwaastrogrowthbeta ndepụtacabinetlọ mkabinetokpuonyeisi.ioigwe ojiiNwokeịrunụachọpụtachọpụtaranchọpụta ngwaọrụchọta beta ahịa ngwá ọrụchọta ngwá ọrụ betachọta ngwa ahiachọta softwarechọta ngwaọrụg2 igwe mmadugetappulo orumalitenchịkọta ahịaahịa techteknụzụ ahịangwa ahiaihe akaratọgbọrọịchụ nta ngwaahịaakwalite mmaliteakwalite oru ngokwalite mbido gịakwalitelelee mbido mratemystartupnnabataihe nsure ọkụmkpanakandụmọdụ ngwanrọngwanrọ softwaresaịtị ngwanrọakwụkwọ ndekọ ngwanrọna-ere ihe na-atọ ụtọndepụtambido kụrụmbido diggernchọpụta mmalitemmalite kpalieahia mmalitembido mbidombidotoolowlntụkwasị obintụkwasị obinhọrọ ndị na-ere ahịa
Jenụwarị 12, 2015 na 3:21 PM
Daalụ maka itinye anyị na ndepụta gị, Douglas. Ọ dị ka ị họpụtara nnukwu ngwakọta nke akụ - ụfọdụ nwere usoro ederede karịa, ebe ndị ọzọ (dị ka anyị) bụ ndị UGC na-achịkwa. Arefọdụ na-agbakarị nkịtị, ebe ndị ọzọ (dịka SocialPiq) na-elekwasị anya na otu ụdị.
Abụ m G2 ìgwè mmadụ egosila na ọ bụ enyemaka maka gị, enwere m olileanya na ọ bụ maka ndị na - agụ akwụkwọ gị. Daalụ ọzọ!
(MARA: Abụ m onye ọrụ dị mpako nke G2 Crowd.)
Jenụwarị 12, 2015 na 5:47 PM
DK: M na-elekwa anya http://sandhill.com/venture-capital-deals/ iji hụ onye na-enweta ego ego a.
Sep 23, 2015 na 4:22 PM
Lekwasị anya na ị na-eme ka mgbasa ozi a na-akwụ ụgwọ na nke nweere onwe gị tupu ị gbanwee n'ime usoro mgbasa ozi akwụ ụgwọ, ọkachasị ma ọ bụrụ na agbanyeghị gị. Enwere ọtụtụ narị blọọgụ mmalite ebe ahụ, yabụ lekwasị anya na nke kachasị elu: Onye akaebe, ProductHunt, Launch na-esote na Unchlọ ọrụ. May nwere ike ghara ịdebanye gị na 4 niile, mana ọ bụrụ na edepụtara gị otu ma ọ bụ abụọ, ị ga-amalite ịhụ mbido mmalite gị na Facebook, Twitter, Reddit na teknụzụ teknụzụ.
Sep 24, 2015 na 3:53 PM
Alex - nnukwu Ama. Anyị ga-ekekọrịta saịtị gị na ndị a.
Ọkt 25, 2016 na 11:58 PM
Edemede dị egwu, yana ọtụtụ akụ dị ukwuu iji lelee maka ndepụta mmalite gị. M na-arụ ọrụ m site na ndepụta, ma n'ezie malitere na ikenye m mmalite, Task Nduru, na BetaList urua.
Achọpụtara m na ọ bụ usoro na-akwụghachi ụgwọ mara mma. Anyị enwetaghị ndị 100 nke ndị debanyere aha, mana jisiri ike nweta ọnụọgụ ego dị elu na ntinye aka 66.
Edere m blog post na usoro niile ị nwere ike ịlele http://blog.taskpigeon.co/betalist-review/
Nov 7, 2016 na 2:41 AM
Hey Douglas, ndepụta dị ukwuu, belata ọtụtụ mgbalị anyị iji kwalite mmalite. Anyị agbalịrị ndepụta efu site na adshour.com na ndepụta gị wee chọta ya na-atọ ụtọ. Ha nwere ndepụta ndepụta mmalite + 130 + n'efu.
Josh Nwachukwu (@John_onyeukwu)
Dee 14, 2016 na 5: 40 AM
nke ahụ bụ nnukwu isiokwu Douglas. Biko mee ka ndị a na-abịa!
Dee 14, 2016 na 10: 33 AM
Feb 4, 2017 n’elekere 2:24 nke abali
Ndewo Dougles Nice Ndepụta.
Ole na ole ka ịtinye
Feb 4, 2017 na 12:13 PM
Daalụ nke ukwuu Hardik! M tinye saịtị gị na ndị ọzọ.
Feb 8, 2017 n’elekere 12:09 nke abali
Daalụ Douglas maka itinye saịtị m n'ime ndepụta 🙂
Mar 25, 2017 na 12: 38 PM
Lelee kwa ebe a. http://www.startupinspire.com
Mar 25, 2017 na 8: 25 PM
Ọmarịcha saịtị! Tụkwasị na ndepụta anyị ma bipụtaghachi ya.
Mar 30, 2017 na 9: 18 AM
Daalụ nke ukwuu Douglas Karr!!!
Share na-ekere òkè na saịtị na-enye aka maka ndị ahịa.
Nov 26, 2017 na 8:01 PM
Onye ọzọ ịgbakwunye na ndepụta ahụ ga-abụ mmalite na Canada (https://startupsincanada.com)
Nov 26, 2017 na 8:05 PM
Ju isi nri, Kristian! Daalụ, agbakwunyela m na ibe.
Nov 28, 2017 na 8:30 PM
Ọ bụghị nsogbu ma ọlị, Douglas!
Aug 14, 2018 na 1:46 PM
Otu ọzọ iji gbakwunye na ndepụta. Nkwalite ngwa na nkwalite onwe n'efu https://growingpage.com/
Feb 5, 2019 na 6:31 PM
Ọ ga-amasị m ịtụ aro ịtinye SaaSHub https://www.saashub.com na ndepụta dị n'elu. Ọ bụ ezigbo ihe ọzọ na "AlternativeTo" na "GetApp".
Feb 5, 2019 na 6:55 PM
Daalụ Stan! M tinye ya na-emelite ndepụta iji wepụ ụfọdụ na-arahụ site n'ụzọ nke ili.